सिल्टल: किन ठूलो एसईओ रेजिडिटीहरू रातभर झल्किदैनन्
त्यहाँ मानिसहरूको बीचमा एक मिथक फैलिएको छ जो बुझ्न सक्दैनन्एसईओ कि एसईओ एजेन्सीहरूले तपाईंलाई रातभरको सफलता दिन सक्छ। एजेन्सीहरूले उनीहरूलाई Google को अगाडिको पेजमा राख्ने प्रतिज्ञा गर्न सक्छन्खोजी परिणामहरू तुरुन्तै। तथापि, यहाँ सहि सत्य हो: कुनै एसईओ एजेन्सी कस्तो महसुस हुन्छ, यसले तपाईंलाई चाँडो नतिजाको ग्यारेन्टी पाउन सक्दैन।
मानिसहरूले प्राय: गल्ती गर्छन् जब खोज इन्जिनलाई सोच्दैअनुकूलन (एसईओ) ले आफ्नो वेबसाइट को रातभर मा बदलेगी। बेशक, यो सच छ कि एसईओ तपाईंको साइट को प्रभावित गर्न को लागी क्षमता मा छ माएक लामो अवधिको दौड। सबै भन्दा एसईओ उत्साही शायद नै भनौं कि एसईओ को सबै फायदाहरु लाई मजा लेने को एकमात्र तरीका धैर्य र बुझन को लागी छकारक को परिसर, जो एसईओ प्रभावी बनाते हो।
ग्राहक सफलता प्रबंधक सेमील्ट ,डिजिटल सेवा, इगोर Gamanenko को सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण एसईओ सत्य को बारे मा बताइन्छ को बारे मा बताइन्छ।
एसईओ परिसर (1 9)
त्यहाँ धेरै कारकहरू छन् जुन तपाइँको साइट भन्दा अघि खेलिरहेका हुन्छन्Google को खोज ईन्जिन परिणाम पृष्ठहरुमा उच्च रैंकिंग पनि SERPs को रूपमा जानिन्छ। सबै पछि, Google को 200 देखि अधिक रैंकिंग सिग्नल छ,जुन संधै परिवर्तन हुँदैछ। तिनीहरू प्रत्येकमा लगातार काम गरेर, तपाईं एकाधिक हाउप्स र प्रयोगको लागि हेर्न सक्नुहुनेछके तिमीलाई महान परिणाम ल्याउँछ र के गर्दैन।
Google को नतिजा पृष्ठहरूमा रैंकिंग उच्च बनाउने चीजहरू मध्ये एकमुश्किल छ कि Google परिवर्तन को घोषणा को बिना यसको एल्गोरिदम को संशोधित राख्छ। जब Google ले यो एल्गोरिदमलाई परिमार्जन गर्दछ, उनीहरु निकै कम हुन्छन्जनतालाई घोषणा गर्नुहोस्। नतिजाको रूपमा, एसईओ विशेषज्ञहरूले सोचिरहेका छन् कि राम्रो स्थानमा रहेको र के गर्ने छैन।
एल्गोरिदम परिवर्तन भएपछि, सर्वोत्तम एसईओ विशेषज्ञहरू भेला हुन्छन्धेरै साइटहरु को डेटा को विश्लेषण को लागि विश्लेषण को लागी डेटा।.जब तिनीहरू डेटाको विश्लेषण गर्छन्, तिनीहरूले कुन कुरा परिवर्तन भएको बारेमा निर्णय गरेर ती परिवर्तनहरूको प्रतिक्रिया कसरी गर्ने?
एसईओ साइंस र कला दुवै (1 9)
एसईओ रेजिङ सिक्न आवश्यक समयको काम गर्न चाहिन्छर कडा अध्ययन गर्दै। यहाँ, तपाइँ वेबसाइट को लेखा परीक्षा चलाउन र Google-अनुकूल सामग्री बनाउनु पर्छ। यी दुई कारक एसईओ बनाउन स्तम्भ हुन्जटिल, तथापि, डिजिटल संसार पुरानो गर्न कुनै सर्टकट छैन।
एसईओ एक लंबी अवधि को दौड (1 9)
गुगलको अगाडिको पृष्ठ एक निरंतर उत्प्रेरित लक्ष्य हो।यसको मतलब छ कि कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन कि तपाईंको प्रतिस्पर्धाहरूले उच्च श्रेणी निर्धारण पाउनेछन् वा होइन। अब सम्म, तपाईं बुझ्न किन SEO जटिल छ र लाग्छकाम गर्ने समय। त्यसोभए, हामी कसरी यथार्थवादी लक्ष्यहरू निर्धारण गर्न सक्दछौं, विश्वसनीय, दीर्घकालिक परिणामहरू प्राप्त गर्ने?
जब तपाईले लामो समयसम्म एसईओ हेर्नुभयो भने लामो समयको लक्ष्यको रूपमा,तपाईंले पहिल्यै हेड स्टार्ट गर्नुभएको छ। एक राम्रो आधार निर्माण गर्न, ध्यान दिनुहोस कि एसईओ लामो समय सम्मको लक्ष्यहरूको आधारमा मात्र काम गर्दछ।यसलाई प्रभावकारी बनाउन, आफ्नो साइटमा अधिक यातायात ड्राइभिङ्ग गर्न र विशिष्ट समय अवधि भित्र अधिक बिक्री गर्न तपाईंको SEO को प्रयास गर्नुहोस्।
एसईओ को निवेश (1 9)
महान एसईओ तपाईंको समय को गहन निवेश को आवश्यकता होस्रोतहरू। जब तपाईं समय, प्रयास र संसाधनहरू ल्याउनुहुन्छ, तपाईंले दिनको अन्तमा कम्पाउन्ड रिटर्न पाउनुहुनेछ।
एसईओ लक्ष्य बदलन गर्दै छन् (1 9)
किनकी एसईओ व्यवसाय वृद्धि को एक ड्राइभिङ्ग कारक हो,त्यहाँ कुनै पनि तरिका हो जसको लागि तपाईं यसको लागि स्थिर योजना विकास गर्न सक्नुहुन्न। Afloat राख्न, वार्षिक एसईओ मा आफ्नो एसईओ पुन: मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। राम्रो परिणामहरूको लागि, विचार गर्नुहोस्यसलाई तिमाही पुनरावलोकन गर्दै।
यदि तपाईंले एक सम्मानित एसईओ कम्पनीलाई भर्ना गर्नुभएको छ भने, तिनीहरू गर्नेछन्तपाईलाई सूचित गर्नुहोस् कि उनीहरूले रातभर नतिजाहरू प्रदान गर्न सक्दैनन्। एक पटक तपाईंले संलग्नताका नियमहरू स्थापना गर्नुभएपछि संचारको खुला लाइन राख्नुहोस्आशाहरु र परिणामहरु को गलत अर्थहरु देखि बचाउन को लागी। यद्यपि एसईओ रातभरको प्रक्रिया होइन, यो केहि छ कि तपाईं पछि देखि निवेश गर्नु पर्छपरिणामहरू प्रयासको लायक छन्। जब तपाईं यथार्थवादी अपेक्षाहरू सेट गर्नुहुन्छ र बुझ्नुहुन्छ कसरी यो कार्य गर्दछ, तपाईं प्राप्त गर्न सही तरिकामा हुनुहुन्छएसईओ मा निवेश मा सर्वश्रेष्ठ रिटर्न।
. - best long-term grain storage corn